लमजुङ, मंसिर ६ गते ।
'पलपल निष्ठुरीको सम्झनाले मलाई सताइ रहन्छ,
बैगुनीको छायाँले सापनीमा पनि झस्काइ रहन्छ '
गीत सुन्दा निकै सरल लाग्छ, तर भित्री भाव भने पलपल मायाको याद र सम्झनामा तडि्पएको हुन्छ । त्यही सम्झनाको पललाई लिएर बैर्ंकर्स गोविन्द गुरुङ श्रोतामाझ आएका छन् । अहिले सिभिल बैंक लिमिटेडको कर्पोरेट कार्यालयमा वरिष्ठ कार्यकारी अधिकृत -महाप्रबन्धक तह) मा कार्यरत गुरुङको यो तेश्रो गीति एल्बम हो । उनले यसअघि २०५६ मा लोक गीतिसंग्रह 'खुदी बजारमा' र २०६७ सालमा आधुनिक गीतिसंग्रह 'परिचय' स्रोतामाझ ल्याईसकेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा १८ बर्षता कार्यरत ४६ बर्षो गुरुङको तेश्रो गीति एल्लब 'पल' को शुक्रबार राजधानीको कमलपोखरी स्थित रशियन कल्चरल सेन्टरमा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्त, उपकुलपति शम्भुजीत बासकोटा, सदस्यसचिव गणेश रसिक, सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृति -सिईओ) किशोर महर्जनले संयुक्तरुपमा विमोचन गरे । कार्यक्रममा कुलपति सरुभक्तले गुरुङका गीतहरु स्तरीय र माधर्ुय बनेको बताए । गीतिसँगीतको विकाश र पर््रवर्धनमा नीजि क्षेत्रले उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको उनले बताए । बैंकको कार्यमा व्यस्त भएर पनि फर्ुसद निकालेर गीत सँगीतलाई निरन्तरता दिएकोमा गायक गुरुङको गायन यात्राको उनले प्रशंसा गरे । नेपाल सँगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिब गणेश रसिकले सो गीतिसँग्रहका गीतहरुको समीक्षा गरे ।
कार्यक्रममा पल गीतिसंग्रहका दर्ुइ ओटा म्युजिक भिडियो पनि र्सार्वजनिक गरिएको थियो । जसको निर्देशन समन अधिकारीले गरेका हुन् । भिडियोमा सावित्री गुरुङ, सुप्रिया कटवाल लगायतले मोडलिङ गरेका छन् ।
गायक गुरुङले बैंकिङ कार्यबाट निस्केको फर्ुसदलाई गीत संगीत सृजनामा प्रयोग गर्दै आएको बताए । बिगतका गीतिसंग्रहको जस्तै यस गीतिसंग्रहको विक्रीबाट उठेको सबै रकम दर्ुगम गाउँका विद्यालयमा कम्प्युटर सामग्री र कम्प्युटर कक्षा सञ्चालनमा खर्च गर्ने पनि उनले जानकारी गराए । लमजुङको भुलभुले १, भँगेरीमा जन्मनुभएका गुरुङले यसअघि आफ्नै गाउँको प्रभात शान्तिपर्ूण्ा माविमा कम्प्युटर सहयोग गरिसकेका छन् ।
पलमा ९ ओटा गीत छन् । ९ मध्य ६ ओटा गीतको रचना र संगीत गुरुङ आफैंले गरेका हुन् । बाँकी तीन ओटा गीतको रचना चलचित्र निर्देशक तुलसी घिमिरे, ललिजन रावल र राजु थापाले गरेका हुन् । पलमा संग्रहित २ ओटा गीतमा बीबी अनुरागी र एउटा गीतमा शक्ति बल्लभको संगीत छ ।
संग्रहको सात ओटा गीत गोबिन्द गुरुङकै स्वरमा छ । जस मध्य ओरालीमा...गीतमा अन्जु पन्तले गुरुङलाई स्वरमा साथ दिएका छन् । संग्रहको जे जस्तो छ भाग्य...गीत १५ वषर्ीय गायक -लमजुङ तारा) विशाल तामाङले गाएका छन् । यस्तै फुलटिपी सिउरी दियौ...गीत दृष्या गुरुङको स्वरमा छ । बाँकी गीत गोबिन्द गुरुङकै एकल स्वरमा छ । गीतिसंग्रहको बिक्रीबाट उठेको रकम उनले गरिब र जेन्हन्दार विधार्थीको अध्ययनमा खर्च गर्ने बताएका छन् ।
बैर्ंकर्स गोविन्द गुरुङ, रेडियो नेपालबाट गुरुङ भाषामा पहिलोपटक पहिलो बुलेटिनको समाचार बाचन गर्ने ब्यक्ति हुन् । गोविन्दले २०५० साल साउन २० गते गुरुङ भाषामा समाचार बाचन गरेको तथ्यलाई 'नेपालको कुन ठाउँमा को पहिलो' भन्ने कितावमा समेत उल्लेख छ । गुरुङ चलचित्र पातेँदेखि प्ह्रेँस्यो, हर्ेर्वे ट र पछिल्लो समय प्रेमको फूलमा समेत स्वर दिनुभएका गुरुङले ५० भन्दा बढी गीत गाईसकेका छन् ।
Posted on:December 1, 2014, 4:05 am
गीत सुन्दा निकै सरल लाग्छ, तर भित्री भाव भने पलपल मायाको याद र सम्झनामा तडि्पएको हुन्छ । त्यही सम्झनाको पललाई लिएर बैर्ंकर्स गोविन्द गुरुङ श्रोतामाझ आएका छन् । अहिले सिभिल बैंक लिमिटेडको कर्पोरेट कार्यालयमा वरिष्ठ कार्यकारी अधिकृत -महाप्रबन्धक तह) मा कार्यरत गुरुङको यो
लमजुङको घलेगाउँमा ओईलिएको फूल
र्सार्क राष्ट्रकै नमुना मानिएको लमजुङको पर्यटकीय घलेगाउँमा गुरुङ भाषा, कला र संस्कृतिमा आधारित चलचित्र 'च्ह्याल्यबै ट' अर्थात ओइलिएको फूलको छायांकन गरिएको छ ।
गुरुङ समुदायमा पछिल्लो पटक परम्परा जस्तै बनेको विदेश जाने प्रथा र गाउँघरको विकृति विसंगतिलाई समेटेर तयार पारिएको कथालाई समेटेर निर्माण गर्न लागिएको चलचित्रको छायांकन घलेगाउँमा ९० प्रतिशत गरिएको चलचित्र युनिटले जनाएको छ ।
यसका साथसाथै घलेगाउँलाई विश्वसामु चिनाउनका लागि गरिएका प्रयासहरुलाई समेटेर चलचित्रको छायांकन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू ! जवाफ पाऊँ ! गच्छदार देशका गृहमन्त्री कि लोकतान्त्रिक फोरमका ?
मुलुकमा गृहमन्त्री छन् कि छैनन् ? यो प्रश्न अनुत्तरीत छ । किनकी, यो प्रश्नको जवाफ सायद गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि छ कि छैन भने अरु कोसँग होला ? हुनत डा. भट्टराई नेतृत्वको �कामचलाउ� सरकारमा गृहमन्त्री मात्रै नभएर उपप्रधानमन्त्री समेतको बिल्ला भिर्दै वरियताक्रममा दोस्रो रहेका बिजय कुमार गच्छदारको नाम उल्लेख छ । तर, उनी आफूले पाएको गृह प्रशासनको जिम्मेवारीप्रति कति जवाफदेहि छन् त ? प्रश्न उठेको छ ।
उत्पीडनको विरोध साम्प्रदायिकता होइन
नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला नजिकिँदै गर्दा उत्पीडित समुदायहरूको गठबन्धन कसिँदो छ । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायतका उत्पीडित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरूको संयुक्त प्रतिबद्धता यसको उदाहरण हो । यसले भावी नेपालको नयाँ खाका प्रस्तुत गरेको छ । यसले राजनीतिक दल, समाज र सबै तहमा एक प्रकारको तरंग ल्याएको छ ।
तर पार्टी नेताहरू भने यसको अपव्याख्या गर्न तल्लीन छन् । उनीहरूले विशेष गरेर कांग्रेस र एमालेका शर्ीष्ा नेताहरूले पार्टीसँगको सरसल्लाहबिना पार्र्टर्ीको नीतिविपरीत मधेसी मोर्चासँग सहमति गर्न पुगेको भन्दै निन्दा गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, आदिवासी, जनजाति सभासदहरूको समूह अर्थात् ककसलाई नै साम्प्रदायिक बनेको आरोप लगाएका छन् ।
जाँडरक्सी विरोधी चलचित्र 'मास्यो'
गुरुङ समाजमा जाँडरक्सी विना कुनैपनि सामाजिक काम अघि बढ्न सक्दैन । विवाह संस्कारदेखि मृत्यूसंस्कारसम्म तथा पाहुनाको स्वागतसत्कारका लागि जाँडरक्सी प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
राम्रो खालको जाँडरक्सी मर्दापर्दा र पाहुनाको स्वागतमा खर्चिने गरेको गुरुङ समाजमा पछिल्लो समय ब्यवसाय नै संचालन गरेपछि जाँडरक्सीले नराम्रो प्रभाव पार्न थालेको छ । जाँडरक्सीसंगै जुवातासले गर्दा गाउँघर कुरुप बन्दै गएको भन्दै यसविरोधी अभियान गुरुङ कथानक चलचित्रवाट थालिएको छ ।
राजुले नचाए, विष्णुले रुवाए
लमजुङको सदरमुकाम बेसीशहरमा संचालन भइरहेको तेश्रो लमजुङ महोत्सव २०६८ को मुख्य आकर्षाको केन्द्रविन्दू राष्ट्रिय कलाकारको प्रस्तुति बनेको छ ।
वेसीशहरको त्रिवेणीफाँटमा आयोजना गरिएको महोत्सवले दर्शकहरुलाई कहिले हँसाएको छ त कहिले नचाएको अनि कहिले रुवाएको । सांगीतिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा आईतवार संचालित राष्ट्रिय लोकदोहरी गीतका हस्तीहरुको प्रस्तुतिले दर्शकहरुलाई भरपूर
पर्यटकको बर्साई लम्ब्याउन नारायणी, गण्डकी र लुम्बिनी प्याकेज
विश्व मानचित्रमा सानो भएपनि पर्यटकीय दृष्टिले नेपाललाई विश्वमै उत्कृष्ट मानिने गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको खानी एवम् धार्मिक तथा सा�स्कृतिक विविधता हाम्रो पहिचान बनेको छ । हिमाल, पहाड र तर्राईबीचको निकटता तथा जातीय सद्भावले पर्यटक बढाउनमा ठूलै भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । वर्षोनी लाखौं विदेशी पर्यटक भित्रनुको पछाडि यिनै मुख्य हुन् ।र्
पर्यटनका लागि आवश्यक नीति र योजना नै प्रभावकारी नहु�दा पनि पर्यटकको ओइरो लाग्नुमा प्रकृतिले दिएको यहा�को स्रोतकै भूमिका महत्वपर्ूण्ा छ । पर्यटन नीति-२०६५ को कार्यान्वयन हुन नसकेका र पर्यटन ऐन-२०५३ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको अवस्था
मध्य विन्दूमा साहित्य
जहाँ पुग्दैनन् रवी, त्यहाँ पुग्छन् कवि भन्ने त उत्ति नै छ । दुःख होस् या सुख, आनन्द होस् या अशान्ति, महल या झुपडि, जहाँ जसरी पनि साहित्यको सिर्जना भएकै हुन्छ । मेला पात र चाड पर्व त साहित्य सिर्जनाको थलो नै भईहाल्यो, त्यसबाहेक गाईवस्तु चराउन, गोठालो जाँदा होस् या खेतवारीमा समेत अहिले साहित्य फूल्न थालेको छ ।
नेपालकै मध्यविन्दू मानिने, लमजुङको रम्घा गाविसस्थित दर्ुइपिप्लेमा एक विहानै चहलपहल थियो । सँधै किसानले मात्रै गर्ने दाइँ,